निषेधाज्ञाको समय थपिएसँगै परीक्षा दिँदा यस्ता शर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने ! - Arthatantra.com
निषेधाज्ञाको समय थपिएसँगै परीक्षा दिँदा यस्ता शर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने !
काठमाडौं । उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवधि एक साताको लागि थपिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गर्दै साउन २१ देखि २७ गतेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञाको समय थपेको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा विभिन्न निकायबाट संचालन हुने सबै किसिमका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाहरुको लागि मापदण्ड तयार पारेको छ ।
जसमा परीक्षा सञ्चालन हुने कुनै एक स्थान हल तथा कोठाको आकार अनुसार २५ जना भन्दा बढी मानिसहरु भेला जम्मा हुन नहुने गरी परीक्षा संचालन गर्न भनेको छ । यस्तै परिक्षार्थीहरु हलमा प्रवेश गर्नुपूर्व र परीक्षा समाप्त् भएपश्चात सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको भौतिक दूरी काम गर्नुपर्ने छ ।
एउटा शिफ्ट का सबै व्यक्तिहरु परीक्षास्थलबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिए पछि मात्र अर्को शिफ्ट सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु प्रवेश गर्न मिल्ने गरी फरक समय राख्न भनेको छ ।
यस्तै परीक्षा सञ्चालनका क्रममा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरुका अनिवार्य पालना गरी मास्क तथा सेनिटाइजरको उचित प्रयोग गर्नुका साथै प्रत्येक सिफ्टमा परीक्षा हल अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइज गर्न र गोष्ठि, तालिम, सेमिनार, बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षणजस्ता कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्न भर्चुअल माध्यमबाट गर्न भनेको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन १९ मंगलवार १६:५५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे काठमाडौं उपत्यकामा फेरि थपियो निषेधाज्ञा : अब के गर्न पाउने, के नपाउने ?
पछिल्लाे अब इसेवा मार्फत हवाइ टिकट काट्ने हरेक यात्रुलाई आकर्षक उपहार